Allgedo.com » Halkaan ka dhageyso Khudabadii uu jeediyay maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Home » News » Halkaan ka dhageyso Khudabadii uu jeediyay maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Print here| By: allgedo.com:
Sunday, September 16, 2012 //
1 Jawaab Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad aan caadi ahayn waxa uu ka jeediyay munaasabadda Caleema saarkiisa.
Munaasabadaan waxaa ka qeyb galay xubno badan oo caalamka ka kala yimid, waxaana madaxweynaha uu aad ugu mahad celiyay dhamaan martidii maanta timid.
Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay leedahay saaxiibo aad u badan misane wax walba la qeybsada, waxaana uu sheegay in dowladii KMG ee Shariif Sheekh Axmed ay wax badan qabatay.
Si kastaba munaasabadii maanta ayaa ahayd mid aan loo kala harin, waxaana si toos ah looga daawanaayay qaar ka mid ah TV-yada Soomaalida ah.
Halkaan ka dhageyso Khudbada Madaxweynaha.
Halkaan ka dhageyso Khudabadii uu jeediyay maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. " taleex khaatumo somaliweyn says:	September 16, 2012 at 12:55 pm	mudane madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxad tahay madaxweyne QARAN aan kumeel gaar aheyn shacbiga waqooyi bari somaaliya waxey kugula talinayaan inaadan yeelin Raisalwasaare u faroole ????? kuu keeno ama raali ka yahay faroole waa ????? o beeshiisa ???? kaliya matala putland o dhan ma matalo, hadaad rabtid inaad guul gaarto qof isaga ka madaxbanaan Raisalwasaare u dooro, somaaliya hanoolaato